Miyaannu qabannaa xarun dhanaan robot ah? - Geofumadas
GPS / Qalabka
Miyaanu qabannaa xarun dhan robot?
Ogast, 2010 GPS / Qalabka
Dhowr maalmood ka hor waxaan leenahay wada sheekeysi farxad leh saaxiib saaxibtinimo ah oo ku saabsan isticmaalka waxaan iminka siinayaa maskax ahaan, iyo haddii robotics ay i caawiso si aan yareyno waqtiga. Halkan waxaan soo koobayaa qeyb ka mid ah hadalka.
Waxaan ugu yeernaa xarun robot.
Marka la soo koobo, waa koox u shaqeysa in ay raadiso bartilmaameedka gaarka ah, iyada oo la xoqdo illaa laga helo. Shaqadani waxay la socotaa qalab gacan qaad oo ka shaqeeya saldhigga meesha uu ku yaallo meesha prismka ku yaal.
Calaamad kasta mar hore waxay leedahay alaabta carruurtu ku ciyaarto, tan ugu fiican ee aan ku arkay arintani waa Focus.
Sokkia Ma ogi haddii ay horey u leedahay jihada, laakiin Topcom, labadaba qaybta Ashtech.
Marka aanad isticmaalin.
Sahamooyinka caadiga ah, sida kakalaada, isticmaalka yar ee aan arko, ugu yaraan labadan sababood:
1 Waxay noqon kartaa wax yaraato. Maxaa dhacaya waa in, haddii operator ka baxo qalabka saldhigga heerka, ururinta buugan qaadataa oo ka dhigeysa soo askunmay ku filan kooxda ka heli kadis ah qaar ka mid ah noqon doona. Mid ka mid ah iyaga ayaa ah in qalabku uu saacado dhinac u socdo ilaa uu ka helo prism-ka, iyo haddii ay u socoto jihada ka soo horjeeda, marxalad kasta waxay siin doontaa isbeddel buuxa wareega buuxa.
Laga yaabee, sida saaxiib ayaa yiri geofumadoHaddii kooxood kuwaas lahaa in la soo noqnoqoshada UHF shidma click ah shaqeeyaan, si ay u sameeyaan howlgallada dhakhso 4 rubuc, si ka dhigi doonaa askunmay ka dibna kaliya sameeyo howlgal ee Rubuca in. Tani waxay badbaadineysaa waqti badan.
2 Maaha ammaan. Tilmaamintani waxay ahayd sigaar cabbay Qeyb ahaan, ka fikiraya wadamada ay shaqadu qaali tahay oo ay macquul tahay badbaadinta cadeneros. Sayidka, sahmiyaha uu noqdo shaqaale ee saldhiga iyo sidoo kale socda askunmay ah, ayaa sidoo kale ku amraya Maala ee uu waardiye gaar ah, ugu dambeyntii, on dhan. Laakiin shuruudan ma khuseeyo dalalka Isbanishka ku hadla in kharashka bixinta lacagta bouncer u yar yahay iyo halka in la barbardhigo dalalka horumariyo, xatooyo guud ahaan saldhigyada dhacaya oo ay leeyihiin ilaalo hubaysan ee soo socota.
Goorta la isticmaalo.
Isticmaalka la arki karo waa mid la socota maskax ahaan. Tani waa farsamadani ay keentay saldhigyada casriga ah, kuwaas oo xajiya aagga oo dhan, iyo sidoo kale radar, ka dibna tan waxaa loo hirgeliyaa mesh saddex-cabbir ah. Kiisku wuxuu tusaale ahaan noqon karaa shaqo ah dhaqdhaqaaq ballaaran oo dhulka, jarista, buuxinta dhirta; la howlgal a at 6 ahay gobolka bilowga ah, isla goobta isku taagan, at 5 pm ee 5 xisaabinta mugga daqiiqo ayaa soo saaray lahaa lahaa.
Sidoo kale shaqooyinka khaaska ah ee takhasuska leh, sida midda Leica ku dhawaaqday, bogga Hexagon (shirkadda dhowaan sidoo kale Intergraph iibsaday).
Haddii mid ka mid ah maalmahaas, Dawladda Maraykanku waxay kiraysatay inay daraasad ku samayso rugta kasta oo leh sanka George Washington ... dhab ahaantii waa robotics waa habboon.
Post Previous«Previous Kastamka degmada, qaabkani waa mid habboon
Post Next Decidiéndonos by MapServerNext »
7 Jawaab: "Ma waxaan ku shaqeynaa xarun dhanaan robot?"
Abriil, 2017 at
Haha ayaa lagu salaamayaa salaan
carlos chavez isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2016 at
Qof ayaa iiga sheegi kara haddii wadarta rikoodhka robotku uu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu gacanta u isticmaalo, si uu u shaqeeyo
wadarta rikoodhka robot waa inaad haysataa ruqsad ama iibsato barnaamij.
Felix Nuñez isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2012 at
Exelente Pagina ee waqtigeyga brosa oo ka fiican sidii loo dhoofi lahaa iyo in lagu sheekeysto boggan. Hambalyo!
Myr isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2010 at
«... markii heerka bisaylku uu gaadhay koror aad u badan, waxaa loo qoray heerkaas, waqtiga looma luminin soo socda boggaga internetka ee aan ka soo bixin himilooyinkaas. »
Waxaan u maleynayaa in wax la mid ah.
Waxay u badan tahay xaqiijinta inay tahay fikrad aan dhammaanteen ku baranno inaan wax ku baranno nolosha adduunkan. Aniga qudhaydu, sababtaas awgeed waxaan ku guulaystay faallooyin dhawr ah oo la mid ah; Mar dambe dhexdhexaad kama dhigo, si fiican ayaan ugu raaxeystaa.
Haddii la qiimeeyo, marka heerka qaan-gaadhka uu gaarey heer aad u sarreeya, wuxuu u qoraa heerkaas, ha ku waarin wakhti ka dib bacaha soo socda ee aan buuxin waxyaalahaas laga filayo.
Sababta oo ah xogta ARIN WHOIS waxay noqon kartaa mid khiyaano leh dib-u-celin wax ku ool ah oo ka badan hal maaddo, in ka badan hal ka mid ah, in ka badan hal CMS.
Ciddiyaha isagu wuxuu leeyahay:
Waa Raro-Malo blog dareenka ah in Florentino Fernandez leeyahay
Waxaan jeclahay blogkan wax badan.